मोदी र ओलीले जनकपुरमा उद्घाटन गरेको बस अयोध्या नगई काठमाडौँ आउने भएछ – MySansar
मोदी र ओलीले जनकपुरमा उद्घाटन गरेको बस अयोध्या नगई काठमाडौँ आउने भएछ
तपाईँहरुलाई याद होला, पछिल्लो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सुरुमा जनकपुर पुगेका थिए। त्यहाँ उनले हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसित मिलेर एउटा बसलाई हरियो झण्डा देखाएका थिए। त्यो बस जनकपुरबाट अयोध्या पुगेको थियो। तर यो बस त्यही एक पटक अयोध्या पुग्यो। त्यसपछि फेरि चलेन। बीबीसी नेपाली लेख्छ– नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको जनकपुरधामदेखि अयोध्यासम्मको बस सेवा एकपटक चलेर बन्द भएको छ। आज समाचार हेरिरहँदा फेरि उस्तै शैलीको अर्को हरियो झण्डा उस्तै बसका लागि देखियो।
यसपालि दुई जना प्रदेश मन्त्रीले हरियो झण्डा देखाएछन्। यस पटक चाहिँ काठमाडौँ-जनकपुर पर्यटक बसको उद्घाटन रहेछ। हेर नौटंकी, एउटा कम्पनीले जाबो एउटा बस सेवा सुरु गर्दा पनि दुई दुई जना मन्त्री भएर झण्डा देखाउन जानु पर्छ त? त्यसो त प्रदेश मन्त्रीहरुको अरु काम नै के पो हुन्छ र।
ध्यान दिएर हेर्नुस् त हरियो झण्डाको शैलीमात्र हैन बस समेत त्यही हो। मोदी ओलीले उद्घाटन गरेको बस पनि दीप ज्योति एडभेन्चर टुर्स एण्ड ट्राभल्स प्रालिकै थियो। अहिले जनकपुरबाट काठमाडौँ चलाउने भनेको बस पनि त्यसैको हो। भनेपछि जनकपुरबाट अयोध्या जान नसकेको बस काठमाडौँ पो आउने भएछ हैन त?
2 thoughts on “मोदी र ओलीले जनकपुरमा उद्घाटन गरेको बस अयोध्या नगई काठमाडौँ आउने भएछ”
अयोधाया मा ”राम” छन् , काठमान्डू मा ”बाबुराम ”| अब अयोध्या जाने बस मात्र हैन , अयोध्या बासि नै काठमान्डू घर जम गर्न आउदैछन बिस्तारै |
झन्डा पनि same रहेछ